Hlela izihloko zezindaba zakho ze-WordPress kalula | Martech Zone
Bengifuna i-plugin noma ikhodi ethile yokuxuba izihloko ekhasini lethu lasekhaya ku DK New Media ukuzijabulisa futhi ugqokise ikhasi lasekhaya kancane. Inkinga bekuwukuthi ngisebenzise itimu enezinkambu ezithile zomugqa wethegi nencazelo yesayithi, futhi angizizwanga ngithanda ukuyihlukanisa kulokhu kuguqulwa.
Ukwenza lokhu ngama-plugins nokuguqulwa kwetimu kungadinga ukusetshenziswa okuhle I-plugin ye-Advanced Field Fields ene-Add-on Field Ephindayo - le yindlela ebesizokwenzela ngayo amakhasimende. Esizeni sethu, noma kunjalo, sihlala sithatha izinqamuleli futhi le snippet encane yekhodi isebenza kahle!
Ngokuyisisekelo, ufaka nje izihloko zezindaba eziningi enkambeni bese uzihlukanisa nohlamvu oluthile (ngisebenzisa uphawu “|”). Ngemuva kwalokho ungasebenzisa umsebenzi wokuqhuma we-PHP obeka zonke izihloko ku-array bese usebenzisa umsebenzi we-PHP's shuffle ukushintshanisa ukuhleleka kwamalungu afanayo, bese ukhombisa umphumela wokuqala. Ukhombisa kuphela umphumela wokuqala… ngale ndlela uma unomphumela owodwa kuphela usazokhonjiswa kahle!
Esihlokweni sethu lapho isihloko sikhonjiswa khona, simane nje simiselela umbhalo oyisihloko ngekhodi elandelayo:
Uma ufuna ukuzijabulisa, ungakudlulisa lokhu njenge- ukuguquguquka ngokwezifiso ku-Google Analytics futhi uvivinye ukuthi iziphi izihloko ezisematheni ezisebenza kahle kakhulu!
Tags: ukuqhumaphpyenza okungahleliwephendula isihlokoshiyashintsha isihlokoisihloko se-wordpress